Vaovao - mety amin'ny fampiasa rano azo sotroina ve ny fantsom-pe?
Ny rafitry ny fantsona polyethylene dia ampiasain'ny mpanjifantsika amin'ny famatsian-drano fisotro hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 1950. Ny indostrian'ny plastika dia nandray andraikitra lehibe tamin'ny fiantohana fa ny vokatra ampiasaina dia tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny rano.
Ny karazana fitsapana atao amin'ny fantsom-panafody PE dia mandrakotra ny tsiro, fofona, fisehoan'ny rano ary fitsapana ny fitomboan'ny zavamiaina bitika anaty rano. Ity dia fitsapana maro karazana kokoa noho ny ampiasaina amin'izao fotoana izao amin'ny fitaovana nentim-paharazana, toy ny metaly sy simenitra ary vokatra simenitra simenitra, any amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana. Noho izany dia misy fahatokisan-tena bebe kokoa fa ny fantsom-panafody PE dia azo ampiasaina amin'ny famatsian-drano azo sotroina amin'ny toe-javatra iasana.
Misy fiovana kely amin'ny fitsipi-pirenena sy ny fomba fitsapana ampiasaina any amin'ireo firenena any Eropa. Ny fankatoavana ny fangatahana rano fisotro dia nomena tany amin'ny firenena rehetra. Ireto manaraka ireto ny fankatoavan'ny andrana sasany dia ekena any amin'ny firenena eropeana hafa ary indraindray manerantany kokoa:
Inspektoratatoran'ny rano fisotro UK (DWI)
Alemana Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
Ny fantsona fantsona PE100 dia tokony hamboarina hampiasaina amin'ny fampiharana rano azo sotroina. Ankoatr'izay, ny paompy PE100 dia azo amboarina avy amin'ny volo manga na mainty misy tsipika manga izay mamaritra azy ho mety ampiasaina amin'ny fampiharana rano azo sotroina.
Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fankatoavana ny fampiasana rano fisotro azo alaina avy amin'ny mpanamboatra fantsona raha ilaina izany.
Mba hampifanarahana ny lalàna mifehy sy hahazoana antoka fa ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny rano fisotro dia voatsabo amin'ny fomba mitovy, ny drafitra fankatoavana EAS Eoropeana dia novolavolaina, mifototra amin'ny Vaomiera Eoropeana
UK Inspektoratnan'ny rano fisotro (DWI)
Alemaina Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
Frantsa CRECEP Centre de Recherche, d'Expertise et de
Toro lalana 98/83 / EC. Manara-maso izany ny vondrona iray an'ny Regulator Rano Eoropeana, RG-CPDW - Vondron'ireo mpandrindra ny vokatra fanamboarana mifandraika amin'ny rano fisotro. Natao izany fa ny EAS dia hanan-kery amin'ny 2006 amin'ny endrika voafetra, saingy toa tsy azo ampiharina tanteraka izany mandrapahatongan'ny daty lehibe aorina rehefa apetraka ny fomba fitsapana ho an'ny fitaovana rehetra.
Ny fantsom-plastika ho an'ny rano fisotro dia voasedra mafy isaky ny Fanjakana mpikambana ao amin'ny EU. Ny fikambanan'ny mpamatsy akora (Plastics Europe) dia efa ela no nanolo-kevitra ny hampiasa plastika mifandraika amin'ny sakafo amin'ny fisotroana rano fisotro, satria ny lalàna mifandraika amin'ny sakafo no henjana indrindra hiarovana ny fahasalaman'ny mpanjifa sy hampiasa ny fanombanana poizina toy ny takiana amin'ny torolàlana avy amin'ny komity siantifika ao amin'ny Vaomiera Eoropeana. ho an'ny Sakafo (iray amin'ireo komity an'ny maso ivoho fenon'ny sakafo eropeana). I Danemark, ohatra, dia mampiasa lalàna mifehy ny fifandraisana amin'ny sakafo ary mampiasa fepetra fiarovana fanampiny. Ny fenitry ny rano fisotro Danoa dia iray amin'ireo sarotra indrindra eto Eropa.